Mpivarotra eny amin'ny Petite Vitesse aho ary mahita tsara ny asa ratsy ataon'ireo mpangaro-paosy • Madagossip
il y a 2 années 8.1 K
Mpivarotra eny an-toerana aho
Izaho dia mpivarotra eny amin’ny Petite Vitesse ary mahita tsara ny asa ratsy ataon’ireo mpangaro-paosy sy mpanendaka. Ireo mpangaro-paosy eny an-toerana eny ireo dia 4mi ary fianakaviana maro zareo no matory amoron-dalana. Ao ambadiky ny Poste ao zareo no matory : ny mbola kelikely mangaro-paosy ary ny efa lehibe manao sintomahery sy manendaka. Ny toerana fanendahany moa dia manomboka eny amin’ny Gare Soarano ka hatreo amin’ny Rond-Point Isotry.
Ny lasibatra voalohany dia ireo vazaha, indrindra ireo izay tia tia maka sary. Voaendaka ny finday na ny fakantsary. Raha ilay ankizy somary kelikely indray no manao ny opération dia na izy ireo mody mangataka dia takomany satroka ny tanany kanefa iny tanany iny mangaro-paosy. Na rehefa tsy tratrany amin’izay moa dia efa manana lame izy ireo ka tatahany raha ohatra ka mitondra kitapo avy aty aoriana.
Rehefa mamely gasy indray izy dia toy izay ihany ary ireny olona mibaby kitapo ireny no tena matetika tratrany amin’izany : tatahany amin’ny lame ilay kitapo dia savainy avy eo. Ireo mandeha bus indray moa izany ka mi-téléphone dia voasintona avy hatrany raha vao mihanahana ary ny fitsoahany dia ao anaty tsena ao ihany. Misy efa mpandray entana ao Isotry ao ary hitako tsara izany satria izaho efa voaharo-paosy teny tamin’ny vao nanomboka nivarotra teny fa tratrako ny ampitson’iny ilay bandy kely ary nanoro ilay nisy ilay téléphone 📱…
Vakio koa : Tantaraiko anareo ny fisolokiana saika nahazo ahy androany
Izahay moa dia tsy afaka manakana azy ireo satria be loatra izy ireo ary miandahy miambavy. Mety mahavita hatramin’ny mamono anao raha manakana azy manao ny asa ratsiny ianao. Zareo rahateo mitondra antsy na zava-maranitra rehefa manao ny asa ratsiny eny. Mampalaelo ny mijery ireo olona tratran’izy ireo indrindra fa ireny olona avy any ambanivohitra ireny, mba tonga hiantsena eny amin’ny Petite Vitesse.
Tsy lavitra eo anefa no misy ny Hotel de Polices na Central 🚨. Alohan’ny fiviliana mankany amin’ny Centrale avy aty am Petite Vitesse anefa dia misy police 5 na 6 zareo manakana moto eo (mitady vola no tena marina). Nefa dia mandalo eo ambany masony fotsiny ireo tontakely. Nisy fotoana moa za niezaka ny naka sary sy video azy ireo fa tsy vita mihitsy hatramin’izao.
Koa mba atsipy ny teny eh! Mijaly ny vahoaka eh! Mitaintaina vao mitondra vola miantsena eny. Afaka ataonareo ny manao tenue civile dia atoro anareo izy ireo fa tena efa be loatra tsy latsaka ny 20 izao zareo no itako isanandro eny.
Olon-kafa indray no mitantara
Ampefiloha, Cnaps, Mama sy ny manodidina ! Mitandrema ianareo mpandeha tongotra, ianareo anaty fiara fa izy roalahy ireto dia sahy maka sy manendaka avy hatrany.
Mpanendaka Ampefiloha, Cnaps, Isotry, Assurance Mama
Raha za nandalo teo amin’io toerana io androany maraina dia nahita azy roalahy ireo (efa fantatra amin’ny paoziny). Nijerijery mpandalo sy anaty fiara. Dia nandrasako mihintsy izay nataony. Nandalo ity bandy kely iray nibaby sakaosy ka nenjehin’izy roalahy avy hatrany dia nikisinany ary voavahy avy hatrany ilay sakaosy. Dia lasa nitsaoka ilay bandy kely.
Vakio koa : Nitondra moto teny amin’ny fasan’ny karana aho tamin’ny 8 ora alina
NB: Fijoroana vavolombelona, tsy nasiana fanovana. Raha ny tsapa dia miraviravy tànana ny polisy. Tsy manantena ny mpitandro ny filaminana anefa ny olona raha ny commentaires hita amin’ny Facebook. Maro ireo mifanentana mba hisian’ny firaisan-kina hiadivana amin’ny mpanendaka sy mpanao sintomahery amin’ny andro mazava be toy izao. Mampalahelo anefa fa mandrangaranga fitsaram-bahoaka ny sasany, indrindra ireo efa nianjadian’ny sintomahery : very fananana na nitondra takaitra.
Tagsinsécurité moto mpanendaka mpangaro-paosy police vol à la tire
Tratran’ny polisy ireo olona 22 mpanendaka, mpamaky trano, mpanao vola sandoka, mpidoroka rongony. Saika hanome kolikoly 800.000 Ar ny sasany
Tatasika	il y a 1 année
Omby miisa 100 no tafaverin’ny zandary tamin’ny tompony taorian’ny fanafihan-dahalo saingy …
Tatasika	il y a 2 années
Delestazy. Miaina anaty haizina ireo mponina amin’ny faritra Mahazo, Ambatomaro, Ankerana, Ankadindramamy
Nitondra moto teny amin’ny fasan’ny karana aho tamin’ny 8 ora alina
il y a 1 mois 283